Izimbadada Trendy amagejambazo
Wedge wangena vogue kule 30s kwekhulu elidlule. Kodwa inani udumo lwakhe wangena lama-70. iminyaka engamashumi amane fashionista bukisisa kutsi ungalethemba umkhiqizo omusha, futhi ekugcineni wafinyelela esiphethweni ukuthi kuwufanele ngempela.
Wedge izimbadada kukhona nenhle futhi engavamile. Zingaba, futhi hhayi njengoba yacwengisiswa izicathulo ne izithende, kodwa benayo inzuzo enkulu phezu kwazo zonke ezinye izinhlobo izicathulo ezifanayo, okuyinto uvumile ngisho izithandwa oshisekayo izikopelo - lula. Kungakhathaliseki ukuthi impahla ekhiqizwa izicathulo ezinjalo - ezenziwe ngokjuni, metal, iraba noma plastic - ke noma kunjalo nzima kakhulu futhi yakhelwe eside egqoke.
Wedge izimbadada - ukhululekile, isifazane, izicathulo engasindi. isitayela yabo kungaba ezihlukahlukene kakhulu. Ziyakwazi evulekile, avaliwe, esakhiwe ngezinto ezihlukahlukene, imiklamo engavamile kakhulu. Kukhethwa lithembela ngokuphelele okuthandwa nguwe. Kodwa kuyilapho inani labo bonke abathandi lolu hlobo izicathulo wukuthi basuke ngokukhetha lula nokuphepha.
Manje ukuthenga zabesifazane izimbadada amagejambazo can ngisho kwi-inthanethi. Yini kufanele sinake ngaphambi kokuthenga? Abaningi look lokuqala ngentengo. Yiqiniso, i umbandela okubalulekile, kodwa hhayi ukhiye. Njengomthetho, intengo izicathulo ibonisa izinga salo: ezibizayo, isikhathi eside uzobe ezigugile. Nakuba ukuthola izimbadada esisebenzayo awukwazi at kabuhlungu.
zindlela Okubaluleke nakakhulu - kalula izicathulo. izicathulo okungafanele kungonakalisa ngisho ukuhamba, ingasaphathwa callouses unomphela. Ngokuvamile imbangela ukungakhululeki akuzona izimbadada, futhi izesekeli eziningi (ezizibeni, buckles metal, njll), okuyinto kuqinile kanye nabo isikhumba, bangaba imbangela ukuzihlikihla. Ngakho-ke, lapho sikhetha isidingo ukuhlola indlela yonke imininingwane tekusebentisa ngeke ibakhathaze uma uhamba.
Wayegqoka nezimbadada ukuze amagejambazo insikazi ingase ibe ematheni ukujiya ezahlukene. Isitayela angawodwa kusihlwa, abayitoho, ogwini tankette cishe ezishukiwe. Ngakho-ke, kufanele siqondiswe ngoba Kwezinye izimo, lutholwa lapho ekhetha izicathulo.
Wedge izimbadada zibukeke bude imilenze, ngakho basuke ngokuphelele kuhlanganiswe mini-iziketi kanye nezinye abagqoka. ukubukeka lokuqala lwavutha iziketi-Tulips noma ogelezayo eside izingubo. Stylish Ensemble umthetho sundress eside , kuhlangene isigqoko ehlobo. Okungcono kakhulu, uma izimbadada izokhetheka ukufanisa nge Panama.
Nokho, musa bagqoke nezimbadada nge nhlonhlo izithende igqoka yentela, izikhindi, ngoba le nhlanganisela ubukeka kancane buthaka futhi ngezinye izikhathi esiyinkinga.
Ngokuvamile tankette ukhethe abesifazane enokuzethemba abanesibindi abazimisele ukuya injongo, hhayi ukuphazanyiswa enjalo noma yikuphi ukuphazamiseka okuncane njengoba ukhathele izikopelo up.
Indaba okunokwethenjelwa kakhulu izimbadada enjalo (abanye izinga nezicathulo) kuyinto lesikhumba. Njengoba imigexo amatshe ingasetshenziswa, amaparele, ezizibeni, itheyiphu nezinye izesekeli ukuthi wengeze ubufazi futhi romanticism isithombe.
Jeans "Gloriya Dzhins": Izibuyekezo ikhasimende
Nike izingubo: jackets, amasudi, izesekeli
Ukuthenga e Finland: sizoyaphi yini ukuthenga, izincomo
Njengoba for emishadweni zehena tattoo ekhaya
IPharadesi - kuyini? Indlela ukuya ezulwini?
Ngokuvamile abantu baphuka izinqulu acinene: izimpawu zabo kanye nokwelashwa
Umdlavuza izingono: izimpawu, ukwelashwa
UVladimir Zhdamirov futhi iqembu "Butyrka"
Zabesifazane: ikhandlela imvubelo
Phalaenopsis. Ukuveza izindlela ezahlukene.